Soomaaliya Maxay Sucuudiga kaga beddalatey xiriirka ay IRAN u jareen? | shumis.net
Home » News » Soomaaliya Maxay Sucuudiga kaga beddalatey xiriirka ay IRAN u jareen?
Soomaaliya Maxay Sucuudiga kaga beddalatey xiriirka ay IRAN u jareen?
Maqaalkan waxaan ku eegaynaa kaalinta Dowlada Sucuudiga ku leedahay siyaasada xiligan ee Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo waliba ummada Soomaaliyeed wixii ay kala kulmeen Boqortooyadaasi Carbeed ee gacanta ku heysa dhulka Barakeysan ee Islaamka.
Haddii Jawaabta HAA tahay, kolay waxaan ka sugeynaa Dowladda Xassan Shiikh Maxamuud inay Xoogaaga Sucuudiga ku deeqay bal Cayrta iyo masaakiinta Soomaalida la gaariisyo.
Title: Soomaaliya Maxay Sucuudiga kaga beddalatey xiriirka ay IRAN u jareen?